I Classici Cherchi Ny Famolavolana Labels Divay - Famolavolana
Ny Famolavolana Labels Divay
Ny Famolavolana Labels Divay Ho an'ny divay manan-tantara any Sardinia, nanomboka tamin'ny 1970, dia namboarina ny famerenana ny labozia ho an'ny tsipika divay The Classics. Ny fandinihana ireo marika vaovao dia te-hitazona ny rohy miaraka amin'ny fomba nentin-drazana alain'ny orinasa. Tsy toy ny labels teo aloha, niasa mba hanome endrika hatsaran-tarehy izay mandeha tsara miaraka amin'ny kalitaon'ny divay avo lenta. Fa ny labels dia niara-niasa tamin'ny teknikan'ny Braille izay mitondra kanto sy ny fomba tsy misy mizana. Ny modely floral dia miorina amin'ny alàlan'ny famelabelarana ny modely iray eo amin'ny fiangonana akaiky an'i Santa Croce any Usini, izay sary famantarana ny orinasa ihany koa.
Anaran'ny tetikasa : I Classici Cherchi, Anaran'ny mpamorona : Giovanni Murgia, Anaran'ny mpanjifa : Vinicola Cherchi.
Ny Famolavolana Labels Divay Giovanni Murgia I Classici Cherchi